Iwo Akanakisa Zviitiko Zvinyorwa zveWordPress | Martech Zone
Wednesday, April 1, 2015 Svondo, October 4, 2015 Douglas Karr
Tiri kugadzirira chechipiri chegore fundraiser yeLeukemia & Lymphoma Society ine Mumhanzi & Technology Mutambo kuno kuIndianapolis musi waApril 26. Gore rakapera takaunganidza madhora zviuru makumi matatu uye isu tiri kutarisira kurova izvo gore rino.
Gore rino takafunga kudzokorora chiitiko ichi kuti zviite nyore kurangarira, uye kuisa saiti iyo iratidzike zvirinani kunakidzwa kusingaite kwataive nako gore rapfuura. Mufaro wedu pakuberekwazve munguva pfupi wakazomira, zvakadaro, apo isu patakaedza WordPress theme mushure meiyo WordPress theme iyo yakagadzirirwa zviitiko. Kuti ndizvitaure, ivo vakangoyamwa chete.
Muchokwadi, iyo yakanyanya kuyerwa theme theme pane yedu yeinofarira WordPress theme saiti inotisetera isu kumashure mavhiki sezvo tanga tisingakwanise kufunga kuti tingamise sei. Kushaikwa kwemuenzaniso data, zvinyorwa zvinotyisa, uye zero rutsigiro zvakatisundidzira kuti tisiye.
Takave nerombo rakanaka zvekuti ndaizeza nokutendeseka pakutenga imwe tema…
Mumaawa mashoma ndakanga ndawana saiti yakanyatsogadzirwa pavari Musoro weFudge uye yakagara pasina kana nyaya zvachose! Iyo yaitogashira Eventbrite tikiti majeti zvakanaka!
Chiitiko uye misangano yemusangano zvakare inoteerera, ichiita yako yechiitiko saiti kana microsite yakanaka kutarisa - kunyangwe pane zvidiki zvidiki. Tinoda madingindira zvakanyanya zvekuti takasaina semubatanidzwa uye tine izvo zvinongedzo mukati meichi posvo. Ndinovimba unovada sesu sezvatinoita - uye ndokuona iwe muna Kubvumbi 26th pachiitiko chedu!
Rutivi runyoro: Gore rinotevera, ndine chokwadi chekuti tichagadzirisa theme yemwana iyo inopa yakanyanya kuomesa ... asi isu takanakidzwa netemusoro sezvazviri, futi!
Tags: dingindira remusanganomisangano yemusanganotheme themevoromavertoh theme
May 10, 2015 pa 6: 56 AM
Zvinotaridza kupora! Ini ndinogara ndichipika naGeneratePress. Haisi yakanangwa kuzviitiko asi yakanaka yakanaka isina chinhu kanivhasi yekugadzira chero rudzi rwechitarisiko chauri kutevera.